Ini ndinovharira sei 'Scam' mafoni? Heino mhinduro chaiyo! - Zvimwe
sei kugadzirisa bricked iphone 6
sei ndisingachasiya imessage group
maitiro ekuwana maapplication muarufabheti
Ini ndinovharira sei 'Scam' mafoni? Heino mhinduro chaiyo!
Iwe unoramba uchiwana mafoni kubva kune asinganzwisisike 'Scam Zvichida' kana scammer uye iwe unoda kuvadzivirira. . Iyo nyowani yekutsotsi yekuzivikanwa chinhu chakakonzera kunyongana pakati pevashandisi vefoni mbozha, avo vanofara nepfungwa yekusafanirwa kugamuchira imwe yakaipa foni. Muchikamu chino, ini ndinokuratidza Maitiro ekuvharira 'Scam Pamwe' kufona kana vangangoita chitsotsi pa iPhone neApple mafoni, saka haufanire kutarisana nenhare mbozha zvakare.
Ndiani 'Scam Zvichida' kana 'Zvichida Scam' uye nei achindidana?
Vamwe vanopa masevhisi vasina waya, vakaita seT-Mobile, vagadzira tekinoroji nyowani yekutsvaga chitsotsi iyo inongonongedza runhare runogona kunge rwune njodzi se 'Zvichida Scam' kana 'Scam Zvichida. PrivacyStar, kambani inobatsira vashandisi vefoni nhare kudzivisa isingadiwe mafoni, zvakare yakabatsira kugadzira chirongwa chetsotsi ichi.
sei kudzima pikicha album pane iphone
Zvichienderana nerudzi rwefoni yauinayo, meseji yaunoona pachiratidziri inogona kunge yakasiyana. Samsung ine yayo yekuona spam uye yekudzivirira sevhisi yavo yeApple mafoni anonzi Hiya, iyo inoshanda nenzira yakafanana zvakafanana.
Aya maficha anochinja ID yekufona yeiye angangoita chitsotsi kune 'Zvichida Scam.' Izvi zvinoshanda vachishandisa nzira dzakasiyana siyana, asi imwe nzira yavanogona kuzviita ndeyekuenzanisa iyo nhamba kupesana nedhatabhesi revasori vanosimbisa. Kana iyo nhamba ichienderana, nhamba yacho inonyorwa.
Nei ndiri kuwana runhare rwakarasika kubva ku 'Scam Pamwe' kana 'Pamwe Scam'?
Kana iwe ukatambira runhare kubva kunhamba yakange yakamonyorwa se 'Pamwe Scam', asi iwe ukasaipindura, inoenderera ichioneka mune iyo tebhu. Munguva pfupi yapfuura muFoni application ye iPhone yako. Kana iwe uchida kudzima yakashaikwa kufona, swipe iyo nhamba kubva kurudyi kuenda kuruboshwe muPhone app uye tora iyo tsvuku bhatani Bvisa .
Izvo zvinoenda kune yeApple smartphone. Iwe unogona kuona yakashaikwa kufona pane yakapotsa mafoni skrini yeyako foni mbozha. Unogona kugara uchibvisa nekutsvedza kunze.
Ini ndinovharira sei 'Scam' mafoni?
Kufona kwekuvharira kunogona kubva kune yako isina waya sevhisi, saka isu tine mamwe matipi auri pazasi. Isu tine zvakare ruzivo nezve maficha iwe aunogona kutora mukana pane Android uye iOS usati waenda kune wako mupi. Iyi sarudzo ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti udzivise 'chitsotsi' mafoni.
Fonera ichivharira pane iPhone
iOS ine chinhu chakavakirwa-mukati icho chinokutendera iwe kuvharidzira manhamba ega. Enda kune yako foni app, wobva wadzvanya Munguva pfupi yapfuura uye tsvaga iyo nhamba yaunoda kuvharira, wobva wadzvanya Bvisa iyi Kutaurirana.
Neimwe nzira, iwe unogona kushandisa app kubva kuApp Store seHiya kana Truecaller.
Kuvharidzira 'pamwe hunyengeri' kufona kuApple
Mafoni eApple ane akafanana zvakafanana chimiro, zvinoenderana nemugadziri. Nhare dzeGoogle Pixel dzine zvinhu zvikuru zvinozoita kuti Google Mubatsiri ikupindurire foni uye ibvunze muridzi kuti azivise. Iri basa rinonzi Fona firita uye inogona kukuratidza magwaro ekukurukurirana pakati peGoogle Mubatsiri uye anotsotsa kuti iwe ugone kusarudza kupindura kufona kana kuifuratira.
Bvisa 'Zvichida Scam' Kufona paT-Mobile
Kune vazhinji vashandisi veApple neApple smartphone, vachiziva kuti chitsotsi chiri kusheedza hachina kukwana - vanoda kuvharidzira mafoni ekunyepedzera zvachose. Neraki, kana T-Mobile iri yako isina waya sevhisi Kune mamwe mapfupi nhamba emakodhi aunogona kufona muPhone app pane yako nhare mbozha kuvharira 'Scam Zvichida' kana 'Zvichida Scam' kufona zvachose.
Tarira: Vamwe vanopa masevhisi vasina waya (Verizon, AT&T, Virgin Mobile, nezvimwewo) havana macode etsika aya, asi kana vakagadzira macode akafanana, tichava nechokwadi chekugadzirisa ichi chinyorwa!
kurwisa madhimoni muzviroto zvangu
Kuvhara 'Scam Zvichida' kana 'Zvichida Scam' mafoni, pinda mukati # 662 # pane iyo keyboard yeFoni application ye iPhone yako kana Android. Wobva wadzvanya pikicha yefoni kuti ufonere, sekunge uri kufonera munhu chaiye.
Kuti uve nechokwadi chekuti wavhara 'Scam Pamwe' kana 'Zvichida Scams' mafoni, unogona kufona # 787 # pane yako iPhone keyboard kana Android foni app. Uye, kana iwe uchingoda kudzima scam ichivharira, ingo tarisa # 632 # pane iyo foni yekushandisa keyboard.
Scam Call Kudzivirira Makodhi e iPhone ne Android
Activate Scam Call ichivharira # 662 #
Tarisa uone kana kubiridzira kwekuvharira kwekuvhura kwashandurwa # 787 #
Dzima scam kufona ichivharira # 632 #
Bvisa kufona kwekunyepedzera neVerizon
Kana iwe uine foni yeVerizon, Fona uye Meseji Block iri pfupi-yekuwedzera sevhisi inogara kwemazuva makumi mapfumbamwe. Kana mazuva iwayo apera, uchafanirwa kuimutsiridza. Iwe unogona zvakare kuvharidzira anosvika mashanu manhamba.
Izvi ... hazvina kunyatsonaka. Iwe zvirinani kushandisa yakavakirwa-mukati kukiya maficha eako iPhone kana Android foni.
apple wachi yakanamatira pane apple logo
Bvisa 'Zvichida Kubiridzira' Kufona neAT&T
AT & T ine sarudzo dzakakura dzekudzivirira chitsotsi, saka haufanire kunetseka nezve 'Zvichida Scam' kufona. AT & T postpaid vatengi vane iyo HD Izwi pasuru vanogona kushandisa yemahara ficha Fonera Dzivirira kubva AT&T. Izvi zvinogonesa vashandisi kukohwa mabhenefiti senge otomatiki kuvharidzira kwekubiridzira kufona uye yambiro dze spam kana fungidziro.
Bvisa mafoni paSprint
Sprint Call Screener chinhu chakakura chinopihwa neSprint neyekutanga uye neprimiyamu level. Chikamu chekutanga, chinonzi Fonera Screener Basic , Inopa dziviriro diki kune yakanyanya njodzi spam kufona. Fonera Screener Uyezve , iyo premium vhezheni ichakudzivirira iwe kubva kune yakaderera njodzi yekufona.
Zvino iwe unoziva izvo zvinonzi 'Scam Zvichida' kana 'Zvichida chitsotsi' uye maitiro ekuvadzivirira. Tinovimba iwe uchagovana ichi chinyorwa pasocial media kuitira kuti shamwari dzako uye mhuri vatorewo maminetsi mashoma ekuvharidzira vanopenga vanga vachiedza kuvafonera. Ndatenda nekuverenga ichi chinyorwa,